Yakavanzika mutemo, Emulator.online 🥇 🥇
Iyi pfungwa yakagadziridzwa musi wa 30/04 / 202020
Kutumira dhata rako pachako pane ino webhusaiti zvinosungirwa kuti ubate, utaure, unyore kune emulator. Online blog, kuhaya masevhisi anoratidzwa pane ino webhusaiti uye utenge mabhuku mumadhijitari fomati.
emulator.online ichaunganidza iyo Yega Dhata yeVashandisi, kuburikidza online mafomu, kuburikidza neInternet. Iyo Yega Dhata yakaunganidzwa, zvinoenderana nenyaya imwe neimwe, inogona kunge iri, pakati pevamwe: zita, zita rezita, email uye yekubatanidza kubatana. Zvimwechetezvo, mune zvechibvumirano chekubata masevhisi, kutenga mabhuku uye kushambadzira, ini ndinokumbira Mushandisi kune mamwe mabhengi kana data rekubhadhara.
Mushandisi ane mvumo yekutorera mvumo yake yekutanga chero nguva.
Maitiro ekutora ruzivo rwemunhu wega anoshandiswa neemulator.online :
Paunenge uchishandisa masevhisi eChiratidzimbo cheChiratidziro chekuitisa e-mail kushambadzira, kunyoresa manejimendi uye kutumira matsamba, iwe unofanirwa kuziva kuti MailChimp Iyo ine maseva ayo akagoverwa muUS uye saka yako pachako data vanoendeswa kune dzimwe nyika kune nyika inonzi isina kuchengetedzeka mushure mekuparadzwa kweSecurity Harbour. Nekuita kunyoreswa, unobvuma uye unobvuma kuti yako data ichengetwe nepuratifomu yeMailChimp, yakavakirwa muUnited States, kuitira kuti utarise kutumirwa kwetsamba dzinoenderana. MailChimp inoenderana neEU yakajairwa zvikamu zvekuchengetedza dhata.
Vashandisi vanogona bvisa chero nguva yemasevhisi anopiwa naEmulador.online iyo iyo Tsamba.
Mune emulator.online, zvinofarirwa nevashandisi vayo, hunhu hwavo, huwandu hwemigwagwa, uye rumwe ruzivo rwunodzidziswa pamwechete kuti vanzwisise zviri nani vateereri vedu uye zvavanoda. Kuteedzera zvatinofarira zvevashandisi zvinotibatsirawo kukuratidza kushambadza kwakanyanya.
Mushandisi uye, kazhinji, chero munhu wechisikigo kana wepamutemo, anogona kumisa hyperlink kana technical link kifaa (semuenzaniso, zvinongedzo kana mabhatani) kubva pawebhusaiti yavo kuenda emulator.online (iyo "Hyperlink"). Kumisikidzwa kweiyo Hyperlink hazvireve mune chero mamiriro ezvinhu kuvapo kwehukama pakati peemulator.online uye muridzi wesaiti kana iyo peji rewebhu mune iyo Hyperlink yakagadzwa, kana kugamuchirwa kana kubvumidzwa neimulator. Online yezviri mukati kana services. Chero zvazvingaitika, emulator.online inochengetera kodzero yekurambidza kana kudzima chero hyperlink kune iyo Webhusaiti chero nguva.
Mushandisi anovimbisa kuti iyo yega data yakapihwa kuburikidza nemhando dzakasiyana ndeyechokwadi, ichisungirwa kutaurirana chero shanduko yayo. Saizvozvo, Mushandisi anovimbisa kuti ruzivo rwese rwunopihwa runoenderana nemamiriro avo chaiwo, kuti zviri zvechizvino uye ndezvechokwadi Pamusoro pezvo, Mushandisi anozvipira kuita kuti dhata ravo rivandudzwe nguva dzese, achingova nemhosva yekusarongeka kana kunyepa kwedata rakapihwa uye nekukuvara kunogona kukonzerwa neiyi kuInternet Servicios Telemáticos SL semuridzi wewebhu emulator. Online.
Iwe unogona kutungamira yako kutaurirana uye kushandisa kodzero dze kupinda, kugadzirisazve, kudzima uye kupikisa Kuburikidza neposvo tsamba paC / Blas de Otero no16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) kana ne-e-mail: info (pa) emulador.online pamwe chete nehumboo hunoshanda mumutemo, senge kopi yeiyo DNI kana yakaenzana, zvichiratidza mumusoro unoti "DATA RINODZIVIRIRA".
Mushandisi anozivisa kuti akaudzwa nezve mamiriro ekuchengetedza dhata remunhu, kugamuchira uye kubvuma kurapwa kwacho neInternet Servicios Telemáticos SL nenzira uye nekuda kwezvinangwa zvinoratidzwa mune ziviso yepamutemo.
Zvinoenderana neLSSICE, Online Servicios Telemáticos SL haiite miitiro yeSAMP, saka haitumire emaimeri ekutengesa ayo asina kumbobvunzwa kana kupihwa mvumo neMushandisi, pane dzimwe nguva, anogona kutumira kushambadza kwayo uye zvakanangana uye vechitatu mapato, chete muzviitiko apo iwe unemvumo yevanogashira.
Nekudaro, mune yega yega mafomu akapihwa paWebhusaiti, Mushandisi ane mukana wekupa mvumo yake yekugamuchira yangu "Newsletter", zvisinei neruzivo rwekutengesa rwakakumbirwa. Iwe unogona zvakare kukanzura kunyorera kwako otomatiki mune iwo mamwe maNhau.